Ezinye iingcebiso zokufumana kwakhona inkuthazo kuyilo lwegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Akukho nto kodwa leli lizwe loyilo, elenziwe phulukana nenkuthazo kwinto oyithandayo, kuba ukuba ubeka inkuthazo ecaleni ayizukulunga kakhulu into oyenzayo kunye neyakho imisebenzi yoyilo kwihlabathi loyilo baya kuba phakathi.
Isitshixo sempumelelo kukuba hlala ukhuthazekile nokuba uthini umsebenzi wakho, kodwa ukuba uzinikele kubuchule nakowuphi na umba wayo, kubalulekile ukuba uhlale ugcina ingqondo yakho isebenza.
1 Nazi ezinye iingcebiso zokugcina ingqondo yakho isebenza
1.1 Khangela imithombo yempembelelo
1.2 Jonga ezinye izinto abazenzayo kwi-intanethi
1.3 Thatha inxaxheba ekuhlaleni kwicandelo lakho
1.4 Okukhona ufunda ngcono
1.5 Kubalulekile ukuba ungashiyi umbono olungileyo ecaleni
1.6 Zibekele iinjongo
Nazi ezinye iingcebiso zokugcina ingqondo yakho isebenza
Khangela imithombo yempembelelo
Into yokuqala enokuyenza kukuba khangela imithombo yempembeleloUngayifumana kuyo yonke indawo, ekuphela kwento ekufuneka uyazi ukuba ungayenza njani kukuyikhangela.
Ukuba ufuna ukukhangela inkuthazo, ukhetho olufanelekileyo kukukhangela rhoqo izixhobo zoyilo lwegraphicOku akuthethi ukukopa, oku kukhangela into esiyithandayo kwimisebenzi yabanye oogxa ukusigcina sikhuthazekile kwaye sikwazi ukudibanisa izimvo kunye nokwenza ezethu.
Jonga ezinye izinto abazenzayo kwi-intanethi
Ungaze ube buhlungu bona amanye amagcisa kwi-intanethiKukwacetyiswa ukuba sinxibelelane kancinci nabo ukuze siqhubeke siphila nenkuthazo esikhokelela ekuthandeni into esiyenzayo.
Iimagazini zobugcisa zinokusinceda fumana ubuchule, Kwi-intanethi sinokufumana iintlobo ezahlukeneyo zokupapashwa kungekuphela ngeSpanish kodwa nakwiilwimi ezahlukeneyo ezisinceda ukuba sibe neembono ezahlukeneyo.
Thatha inxaxheba ekuhlaleni kwicandelo lakho
Enye ingcebiso esikunika yona kukuba uthathe inxaxheba ekuhlaleni, akufuneki uhlale wedwa kwindawo yokufunda, nawe kufuneka uthathe inxaxheba kwiiforamu, konke oku kuya kuxhomekeka kwisixeko okuso.
Ungajonga iminyhadala enikezelwe kwicandelo lakho ukuze ube nenkuthazo encinci, unokuhlala ukhuthazwa ngokugcina ingqondo yakho ivulekile kwaye iyasebenza. Le yindlela yoku yazi indlela abanye abantu abacinga ngayo abanomdla onjengawe.
Kubalulekile ukuba ufunde izinto ezintsha yonke imihla, i-intanethi inokukunceda kule nkqubo ngokusebenzisa iividiyo okanye ngezifundo onokuthi uzithathe kwi-intanethi. Iingcali kwizifundo ezahlukeneyo zinokusinika iingcebiso zokukukhuthaza kwaye zikunike nezimvo ezintsha.
Okukhona ufunda ngcono
Awudingi ukufunda yonke into onokuthi uyenze ngesihloko esinye, ungafunda nantoni na, into ebalulekileyo kukugcina ingqondo iphila ihlala iyondla ngolwazi olutsha, kufuneka ucinge ukuba ingqondo yakho ifana nesihlunu emzimbeni wakho ekufuneka uyigcinile ukuze ibonakale intle.
Indlela elungileyo yokugcina ingqondo yakho isetyenzisiwe ngokufunda, awudingi kuba ngumntu ongenzi nto ngaphandle kokufunda, kuba ukufunda nje amaqhekeza amancinci ngosuku kuyakulunga.
Kubalulekile ukuba ungashiyi umbono olungileyo ecaleni
Asazi ukuba siza kuba nini umbono olungileyo, Sincoma ukuba xa unayo uqaphele into obuyicinga, ungayibhala naphi na, ngakumbi kwifowuni oya kuthi uyiphathe rhoqo.
Ngokwesiqhelo kwenzeka ukuba wenza umsebenzi kwaye ngomlingo uyeke ukwazi into ekufuneka uyenzile kwaye uphelelwa yimpembelelo, kodwa inokwenzeka kwakhona ukuba ubekwenye indawo, umzekelo kwivenkile yokuthenga ethengisa ngeveki kwaye umbono uza engqondweni, yiphakamise!
Ekugqibeleni, sicebisa ukuba uzibekele iinjongoLe yindlela elungileyo yokuhlala ukhuthazekile, ukuba awunanjongo, uya kuba lelinye lamaqela alahlekileyo.
Kodwa oku ayikuko malunga nokuzikholelwa ngokwakho oosozigidi, into oyifunayo kukwenza iinjongo ezithile ezizizo ezinokufezekiswa kwixesha elifutshane ukuze ungakhathazeki, kodwa endaweni yoko cinga kakuhle kwaye ubone ukuba kancinci kancinci uyayiphumeza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezinye iingcebiso zokufumana kwakhona inkuthazo kuyilo lwegraphic